Vista's Colorful Planet: March 2010
မချစ်ကြည်အေး Tag ထားတဲ့ ပိုစ့်ပါ ။
အတွေးများဆိုတော့လည်း ..ပြန်စဉ်းစားရတော့တာလေ ၊ဘာတွေတွေးမိလည်းပေါ့ ။
လောလောဆယ်တွေးမိတာတွေပြန်စဉ်းစားပြီး filter လုပ်ရတာပေါ့ ..။
အခုလောလောဆယ် တွေးမိသလောက်ကတော့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရေးပေါ့လေ
( Relationship ) ပေါ့။
အချစ်အကြောင်းလို့ မပြောချင်ပါဘူး ။ အချစ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် ကအများကြီးကိုး။
လမ်းမှာတွေ့ ခဲ့တဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးစုံတွဲရယ် ၊
ကျနော်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သက်ကြီး စုံတွဲတွေရယ် ကို အခြေခံပြီးတွေးဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်။
ဘာလို့ မချစ်တော့လည်း ? ( သို့ ) အချစ်တွေပါးလျားကုန်တာလည်း ?
မချစ်ကြတော့တဲ့ လင်မယားတွေ .. မချစ်ကြတော့တဲ့ အဘိုးအဘွားစုံတွဲတွေ ..ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲကုန်တာလည်း research လုပ်ကြည့်တာ ။
ဒီလိုအခြေခံအကြောင်းတွေသိမှ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုမချစ်တော့တာတွေ ကာကွယ်နိုင်မယ်ထင်လို့။
တစ်နေ့ ဘတ်စ်ကားစီးနေတုံး အဘိုးအဘွားစုံတွဲတစ်တွဲ တက်လာတယ် ။
အဘွားကြီးက သက်သက် ခွဲထိုင်တယ် တူတူမထိုင်ဘူး ။
၂ ယောက်ခုံမှာ မထိုင်ပဲ ဘေးနားမှာ လူရှိတဲ့ တစ်ခုံလွတ်မှာထိုင်တယ်။
သူ့ နားကကောင်လေးထသွားတော့ အဘိုးကြီးက အဘွားကြီးနားလာထိုင်တယ် ။
အဘွားကြီးက စိတ်ကောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး အေးဆေးပဲ ။ ဆင်းတော့လည်း အဘိုးကြီးက အနောက်ဘက်ကဆင်းဖို့ ခေါ်တယ် အဘွားကြီးက ခေါင်းခါပြီး အရှေ့ ပေါက်ကဆင်းတယ် ။
ပြီးတော့ မှတူတူသွားကြတယ် ။
ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး တွေးမိတာက အဘွားကြီးက ငယ်ငယ်တုံးကတော့ အဘိုးကြီး
ခေါ်သလို့ အနောက်ကပဲဆင်းခဲ့မယ်ထင်ရဲ့ ။
ကြီးလာတော့ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ဆိုတာပြချင်တာပဲလား ၊
ဒါနဲ့ကျနော်နဲ့ သိတဲ့ အဖိုးအဖွားစုံတွဲတွေ ( အချစ်တွေ မရှိတော့တဲ့ လူကြီးစုံတွဲတွေ ) ကို Research လုပ်ဖူးတာ ကိုသွားတွေးမိတယ်။အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကုန်တာမဟုတ်ဘဲ ၊
သူတို့ တွေမတွေ့ ခင်အထိကတော့ ကျနော့် အဘိုးအဘွား ၊ အဖေ အမေ
တွေ ကြည့်ပြီး သေတပန်သက်တစ်ဆုံးချစ်သွားကြတာမို့လို့ 
အဲလိုမချစ်တော့တဲ့ လူကြီးတွေ တွေ့ တော့ စူးစမ်းမိတာပေါ့။
အန်တီကြီး တစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် ကြာလာလို့ မချစ်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ၊
ရိုးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကုန်လာတာဆိုပဲ။
အခုနေများသူမရှိလည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ၊ သားသမီးတွေဆီသွားနေ ၁ လ ၂လ နားအေးတယ်ဆိုပဲ။
နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ ၊ ခဏပဲနေမှာပါအေတဲ့ ။
အခုလည်း တစ်အိမ်ထည်းနေပြီး စကားမှမပြောဖြစ်ကြတာတဲ့ ။ အံသြမိပါတယ် ။
ချစ်လို့ ယူထားတာမဟုတ်ဘူးလား ၊ ဟိုတုန်းက သိပ်ချစ်ပေါ့ သူပြောသမျှတစ်ခွန်းပဲတဲ့ လေ။
ဒါဟာဘာဖြစ်လို့ ပြောင်းသွားတာလည်း ဆိုတော့ ၊ လူပဲအေကြာလာတော့လည်းသည်းခံနိုင်စိတ်မရှိတော့တာပေါ့တဲ့ ။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို လုပ်ချင်တာလည်း လုပ်အုံးမှပေါ့ ၊
တစ်သက်လုံးသူတို့ ကိစ္စ၊ သူတို့ လုပ်ဆိုတာတွေပဲ လုပ်လာရ တာတဲ့ ။
တို့ မိန်းမတွေက သူတို့ တွေလို အိမ်ကဟာကြီးကြာ လာလို့ ရိုးပြီး အငယ်လေးနောက်လိုက်တာမျိုး
မဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာသလို နေချင်ကြတော့တာ ၊
သူတို့ ဝေယျာဝစ္စတွေ နေ့ ရှိသရွေ့ အကုန်လိုက်မလုပ်နိုင်တော့တာတဲ့။
ငယ်ငယ်တုံးကတော့ သားကို သခင်လင်ကိုဘုရားဆိုထားပြီးပြုစုလာလိုက်ကြတာ
ဒီစကားကိုကြားတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကို သွားမြင်ယောင်တယ်။
သူက အဲဒီစကားကို သဘောကျတယ်တဲ့၊ လက်ထပ်တော့မယ့် တစ်ယောက်ပေါ့လေ ။
သူဒီလို နေချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော့်အထင်ကတော့ ဒီစကားမှာLimit ရှိတယ် ထင်တယ် ။ Depends on ပေါ့လေ ။
ယောက်ျားကို ရိုသေ ရမယ် ၊ ရိုခိုးအိပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ရိုသေထိုက်မှ ရိုသေသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။
သူက ကလပ်ကပြန်လာ( အငယ်လေးတွေနဲ့ ပျော်လာ ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သောက်စားပြန်လာ) ကိုယ်က မအိပ်သေးဘဲစောင့်နေရ .. ပြုစု ရိုခိုးအိပ် ဒါမျိူးကတော့ (လုံးဝ)မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ ။
အရမ်းကြီးပြုစုတာမျိုးလည်းသတိထားသင့်တယ် ထင်တယ်။ ကျနော်တွေ့ ဖူးတဲ့စိတ်ကုန်သွားရော ဆိုတဲ့ အဒေါ်ကြီးတွေက အရမ်းကိုပြုစုခဲ့တာများတယ် ။ ဘယ်လောက်တောင်လည်းဆို ..ယောက်ျားရေချိုးထွက်လာ မျက်နှာသုတ်ပဝါ ပုဆိုးအဆင်သင့် ၊ ရေနွေးအသင့် ။ သတင်းစာ စားပွဲပေါ်တင်ပြီးသား ၊ ထမင်းစားမယ်ဆို အကုန်ပြင်ဆင် ထမင်းပွဲရှေ့ ရောက် ပြီးမှ ခေါ်တယ် ။ အဲဒီတော့ ယောကျာ်းမှာ ဘာတာဝန်မှမရှိတော့ဘူး ။ အကျင့်ကပါလာရော ..တစ်သက်လုံးလုပ်ပေးနိုင်သလား စဉ်းစားသင့်တယ် ။(လုပ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်နော် ၊သူတို့ တွေမပြောပါဘူး)။
ကိုယ်က ကလေးတွေမွေး ပင်ပန်းတဲ့ အခါ .. စိတ်မပါလို့မလုပ်ချင်တဲ့အခါဆိုယောက်ျားက ပြောလိမ့်မယ် ။
သူ့ အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ ။ သူ့ စိတ်ထည်းမှာ ဒါမိန်းမတာဝန်ပဲလို့ ထင်နေတာကိုး။ အရင်ထည်းကလုပ်ပေးနေခဲ့တာပဲလေ။ တစ်ချို့ ယောက်ျားတွေဆို လူကောင်းတွေပါ ..အသောက်အစားကင်းတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မိန်းမက လိုလေသေးမရှိလုပ်ပေးလွန်းတော့ ချေးများခြင်တယ် ။ ဟိုဟာမှ ဒီဟာမှ ၊ ရေတောင်ထပြီး ထည့် မသောက်ချင်တော့ဘူး ။
အဲလိုမျိုး အမြဲလိုဆိုတော့မိန်းမတွေ စိတ်တိုလာရော ၊
တစ်နေရာသွားနေ စမ်းဘာတော် သူရှိနေခိုင်းလွန်းလို့ ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရောတဲ့။
များသောအားဖြင့်မြန်မာယောက်ျားတွေ မှာဒီလိုအကျင့်တွေရှိတတ်ပါတယ် ။
အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်သူတွေ မှာတော့ ဒါမျိုးရှားနေပါပြီ ။သူတို့ လည်းသိနေပြီလေ ။
သားကိုသခင်လင်ကိုဘုရား ဆိုတာကို ကျနော့် အဘွားရော အမေရော မသင်ခဲ့ဘူး ။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလောက်ကြီး မလုပ်ခဲ့ ဘူး ။ အဘွားဆို လည်း စာအရမ်းဖတ်တယ် ။ ရှေးခတ်က ဘာအလုပ်မှမလုပ်ရတဲ့ မင်းကတော်ခတ်မှာတောင် သူ့ စီးပွားသူရှာတယ် ။ ယောကျာ်းကို ၁၀၀ ရာနှုန်းမှီခိုတာ မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ ။ ဒါကြောင့်မို့ အဘိုးက ဂျပန်တော်လှန်ရေးထည်းပါမယ်ဆိုတော့ အဘွားက ရှင်စိတ်အေးအေးသွား ကျမမှာ အထုပ်အထည်အပြည့်ရှိတယ် ဆို အားပေးနိုင်ခဲ့တာ။ သူ့ စီးပွားနဲ့ သူလုပ်တတ်သူမို့ စစ်ပြေးရလည်းရောက်တဲ့ နယ်မှာလုပ်ကိုင်စားတတ်ခဲ့တယ်တဲ့။ အိမ်ဖော်တွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိရှိ အဖိုး ကအဖွားကိုကော်ဖီဖျော်ပေးတယ်။
စာအုပ်ဖတ်ပြတယ် ။ အဖွားဝတ်မယ့် ဖိနပ်ကအစ သူကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးတယ်တဲ့။အဘွားကလည်း ညတိုင်းရှိခိုးအိပ်တယ်တဲ့ ၊ အဖိုးကသူတော်ကောင်းကြီးမိုလို့ အရက်မသောက် ၊ ဖဲမရိုက် အိမ်သူကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ် ။ဒီလိုလူမျိုးကိုတော့ ရိုသေရမယ်
ကျနော့်မေမေလည်း ဖေဖေ့ကို အတော်ပြုစုခဲ့ပါတယ် ။သခင်လိုတေ့ာမဟုတ်ဘူးပေါ့။
ရှင်ကာင်းရင် ၁၀ ဆကောင်းမယ် မကောင်းလို့ ကတော့ တိခနဲလို့ ပြောထားတာတဲ့။
မေမေပြောဖူးတာကတော့ မိန်းကလေးတွေက အိမ်ထောင်ကျခါစ မှာအိမ်ထောင်ရေးနိုင်နင်းတယ်ဆိုတာပြချင်တာနဲ့ အကုန်ကျုံးရုံးလုပ်ကြ။
နောက်ကြာလာတော့မလုပ်နိုင်တော့ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းများလာတော့ အဆင်မပြေတွေဖြစ်ကြရောတဲ့။သူလည်းအလုပ်လုပ် ကိုယ်လည်းအလုပ်လုပ်တာချင်းအတူတူ ပိုပင်ပန်းတယ်ဆိုဖြစ်လာတော့တာပေါ့လေ။
ရိုးသားဖို့ လိုတယ် ဘယ်လောက်အထိချစ်နိုင်ပါသလည်း ?
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဘယ်လောက်အထိချစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ရိုးရိုးသားသားသိဖို့ လို တယ်။
ဟန်ဆောင်မှု( တစ်ခါတစ်လေဆို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် မသိလိုက်တာမျိူး) တွေက
ငါ့နှယ် မိုးကျမယ်လေးမှတ်လို့ ယူလိုက်တယ် နောက်မှ ကြာလာတော့ သရဲမကြီးဖြစ်နေတာသိတော့တယ်ဆိုတာမျိူးပေါ့။
သမီးရည်းစားဘဝတို့ညားကာစတို့ ကတော့ ဟန်ဆောင်လို့ ချိုချိုလေးတွေပြော နောက်တော့ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ ပွစိပွစိ နဲ့ အမျိူးသားတွေလည်း ရူးကုန်ရော။
ဂျုး ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ထဲ မှာဖတ်ဖူးပါတယ် ၊
“ အချစ်၌အတ္တများစွာပါသည် “ တဲ့။
ကိုယ်မနှစ်သက်သော အပြု အမူ အပြောအဆိုများကို ကိုယ့်ချစ်သူထံတွင် ခဏခဏတွေ့ ရဖန်များသော် အချစ်လျှော့တတ်သည်တဲ့ ။
ကျနော့်မိတ်ဆွေ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကတော့ အရမ်းဟန်ဆောင်တတ်တယ်။
သူ့ ယောက်ျားကို စကားပြောရင် ချိုလွန်းလို့ ပုရွက်ဆိတ်တက်မှာတောင် စိုးရတယ်။
ကိုကိုကတောင် ဟယ် နင်တစ်ခါလောက်ငါ့ကိုအဲလိုပြောကြည့်စမ်းပါ မကြားဖူးလို့ တဲ့ ။
အဲလို မိန်းမယူမလား ဆိုတော့ တော်တော် တဲ့ဟားဟား။သူလိုချင်တာက ပိုက်ဆံတဲ့ ။
သူ့ အမျိုးသားကို ပိုက်ဆံရှာတဲ့ စက် ( တစ်ခါတစ်လေ နွား) လို့ သုံးတတ်တယ်။
တကယ်မှ မစစ်မှန်တာကို သူ့ အမျိူးသားသိလားမသိလားတော့မပြောတတ်ဘူး။
ကျနော်တို့ အိမ်လာပြီး သူ လက်ထပ်ရတာ ဘယ်လိုပင်ပန်းတယ် ၊
အမျိုးသားက မကူဘူး ၊ဘာညာပြောလိုက် ငိုလိုက်နဲ့ ။
ခဏနေ ဖုန်းလာတော့ “ မောင် ညနေဘာစားမလည်း “ တဲ့ ။ အစောက ငိုနေတာသူမဟုတ်သလိုပဲ။
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ သိပ်ပြီး အပိုဆာဒါးတွေ မရှိဘူး။
ငယ်ငယ်တည်းက ရင်းနှီးခဲ့လို့ လည်းပါမယ်။ မသိတဲ့ လူကြည့်လိုက်ရင် မောင်နှမလို ပဲ ထင်စရာရှိတယ်။
ကျနော် “ ကိုကို“ခေါ်တာကလည်း အစ်ကိုကို ညီမကခေါ်သံနဲ့ ပိုတူတယ်။
မို့ ထင်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပြောထားပြီးသား ၊ မွေးနေ့ လက်ထပ်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်တွေ သတိရချင်ရမယ် မေ့ချင်မေ့မယ် စိတ်မဆိုးကျေး ၊
ဗာလင်တိုင်းဒေး ဘာလုပ်ဖို့ လည်း ..ဘာမှ မလုပ်ဘူး ဟက်ဟက်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်သစ္စာရှိရှိ ကြင်ကြင်နာနာရှိရင်တော်ပြီ။လိုအပ်တဲ့ အခါမှာ အသင့်ရှိနေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း အဖော်မွန်ကောင်း ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။
ကျနော်ကတော့ ပြတ်သားတယ် ။ သိပ်အီစီကလ်ီတွေ မရှိဘူး။
မေတ္တာထားတာ ပိုများတယ် အေးချမ်းတယ်လေ။
ကိုကို ဟာ ကျနော့်အုပ်ထိန်းသူ နေရာပါယူထားတာမို လို့သူ့ ကိုမလိမ်ဘူး ။
ကတိပေးထားတာဆိုလည်း ရှေ့ ရောကွယ်ရာပါ မဖောက်ဖျက်ဘူး ။
မှတ်မိသေးတယ် ငယ်ငယ်က . ကိုကို နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တွေက အသည်းထိခိုက်မလား
မသိလို့ ပြောတာကို နားစွန်နားဖျားနဲ့အသည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီး ကျနော့်ကို သွေး တွေ တစ်ရူးတွေစစ်ပါ အသည်းပေးမယ်ဆိုလုပ်ခဲ့ ဖူးတယ်။ ( နှစ်လုံးရှိတဲ့ ကျောက်ကပ်လိုမျိုးတောင်မဟုတ်ဘူး ) ။
ဒါကိုလည်း မိုက်ရူးရဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်၊ ကိုကိုက ကျနော့်ထက်အစစအရာရာမှာပိုတော်သူမို့ လို့လောကကြီးမှာ သူ အသက်ရှင်နေရင် ကျနော်ရှင်နေတာ ထက်ပိုအကျိူးရှိမယ် ၊
လူကြီးမိဘတွေကိုလည်း ကျနော့်ထက်ပိုကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ် ၊
လူမျိုးဘာသာ သာဿနာအတွက်ပိုလို့ လည်းအကျိူးရှိတယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ 
လိုအပ်လာရင် အသက်ချင်းလည်းဖို့ တောင်စဉ်းစားဖူးတယ်။ ဒါတွေကို ကိုကိုတောင် တော်တော်နဲ့ မသိဘူး။
ဒေါင်ဒေါင်မြည် အောင်နေကောင်းလို့ နှစ်တွေကြာမှ ပြန်သိတာ။ ဒီလို ကျနော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ အင်မတန်စိတ်ဓါတ်မာကြောတဲ့ ကိုကို့ ကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တယ်။
ချစ်ခင်သူတွေခွဲခွာသွားတာ ခံရတာတော်တော် ခံစားရခက်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး သိခဲ့ဖူးသူမိုလို့ 
ကျနော်ကသေရင် အရင်သေချင်တယ် ။
ကိုကို ကလည်းငါ အရင်သာသေရင် နင့်ကိုစိတ်မချတာနဲ့အသေမဖြောင့်ဘူး ထင်ရဲ့ တဲ့။
ကျနော်က လုပ်သမျှတလွဲတွေ မို လို့ တစ်သက်လုံးစိတ်ပူပေးနေရတဲ့သူဆိုတော့ စိတ်မချတာမဆန်းဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူး။
ကိုကိုရဲ့ ဆိုတော့ ၊ နင်သေသွားလည်းရင် ငါ အကြာကြီး တစ်ယောက်ထည်းမနေချင်ဘူး
လို့ စဉ်းစဉ်းစားစားပြောဖူးပါရဲ့ ။ ဒီကလည်း Backup အကြောင်းစကားစမလို့ ကြံတုန်း ၊
ငါလည်း လိုက်သေချင်တယ် နင်မရှိမှတော့ ဘာလုပ်မှာလည်းတဲ့။သူများမိန်းကလေးတွေလို မကြည်နူးပါဘူး ၊ Backup အကြောင်းစပြောတော့တာပေါ့ ဟားဟား။
ကျနော်က ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းသူ၊ ကွန်ပြူတာ သမားလည်းဖြစ်တာမို့ကိုကို့ အတွက်ဆို Backup ထားထားတယ် ။ ကျနော်မရှိတော့ရင် အစားဝင်ဖို့ လေ။ RAID ပေါ့ဟက်ဟက်။သူလေး အကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူး ၊ တောစီးကရက် ။
ကိုကို ကနင်မရှိတော့မှလားဟယ် အခုရောဟင် တဲ့ ။
လုပ်လိုက်လေ ဒါပေမယ့် ကိုကို့ မိန်းမပဲဖြစ်မလား ကျနော့်မိန်းမပဲဖြစ်မလား မသိ။ကျနော်လည်းသဘောကျတာကိုး။
ဟိုကကြားရင် နှစ်ယောက်လုံးတန်းစီ ဆော်မှာ ထင်ရဲ့ ။ဒါတွေ မသိလို့ သာကျနော့်ကိုခင်နေတာ ဟီး။
ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ကျနော့် မေတ္တာကတော့ သူနဲ့ ဆိုသဘောတူတယ် ။
သူက အခုဆို အပျိုကြီးဘဝနဲ့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်
လို့ ငယ်ငယ်တည်းကလည်း ကိုကို့ ကို စွဲလမ်းခဲ့သူ ၊ပေါ်ပင်တွေ့ တဲ့ သူ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူယောကျာ်းယူလိုက်ရင်တော့ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရှာရအုံးတော့မယ် ။ ဟိဟိ။
မကျေနပ်ရင် အချင်းချင်း ဖွင့်ပြောဆွေးနွေးတာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ မပြောဘဲကျိတ်မှိတ်အောင့်အီးထားရင်ကြာလာတော့ အောင့်လုံးကြီး ခဲသွားလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့မှ ခွဲရ စိတ်ရတွေ ဖြစ်ကုန်ရင်ဘယ်လိုမှ မကောင်းနိုင်တော့ဘူး။
ကျနော်တော့ မကျေနပ်ရင်ပြောပလိုက်တာပဲ။ အဲလိုမပြောနဲ့ မကြိုက်ဘူး ဆိုတာမျိုး။ အလိုမကျတဲ့အခါ
(မဟုတ်တာလုပ်လို့အဆူခံရတဲ့ အခါ )မျက်နှာကြည့်ပြီး
အရမ်းအမြင်ကတ်စရာကောင်းတာပဲလို့ အလုံးလိုက်အရင်းလိုက်ပြောပလိုက်တယ် ။
ပြောနေတဲ့အခိုက်မှာတောင် စိတ်ထည်းမှာ မုန်းတာမရှိပါဘူး ၊ပြောပြီးတော့ ပေါ့သွားတာပဲလေ။
အဆုံးတော့ မေတ္တာပါပဲ ။ မေတ္တာ ထားတာအေးချမ်းပါတယ် ။
တစ်သက်လုံး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာ ထားနိုင်ကြပါစေ။
Labels: Tag post;Thoughts 20 comments | Links to this post
Labels: Myanmar;အညာ 17 comments | Links to this post
နေညိုညို ၊ နေရီရီ
Labels: Mandalay, Myanmar 8 comments | Links to this post
Provision your own Kubernetes cluster with private network topology on AWS using kops and Terraform – Part 1
ငါ လွတ်မြောက်စေ.... - အဝါရောင်ရွက်ကြွေတွေ အညိုရောင်ရွက်ကြွေတွေကို အစိမ်းရောင်အောက်ခံ မြက်ခင်းပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အခါ စိတ်ဟာ အလိုလို နာကျင်ရပြန်တယ်။ မတူကြဘူးနော်…၊ သဘာဝဆိုတာ အချိ...
ပုဇွန်ချဉ်ကြော် မွှေးမွှေးလေး - ပုဇွန်ချဉ်လေးတွေ ထည့်ထားပြီး သုပ်စားလို့ ပိုနေတော့ ချဉ်ငံစပ်မွှေးမွှေးလေး ကြော်စားဖြစ်ပြန်ပါတယ် ထမင်းစားမိန်စေတဲ့ ဟင်းလေးဖြစ်လို့ ကြော်စားနိူင်အောင် မာမြာေ...
Revised Draft For Solitary Walk Photobook - This is my most recent revised draft for my Solitary walk photobook. The idea of the cover is based on the concept of meditation/ reflection and inner calm...
မျှော်နေရသောသင်္ကြန် ကြိုနေရသောသင်္ကြန် - ကန်ဒီတို့ရဲ့ တိုပါးရိုးသင်္ကြန်လေး ချောချောမွေ့မွေ့ပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့ ပြီးသွားပါပြီရှင်.. ဒီနေ့ပိုစ့်လေးကတော့ သင်္ကြန်ပုံလေးတွေ တင်ဖို့နဲ့ သင်္ကြန်အမှတ်...